व्यावसायिक खेलाडी कुरा छैन जो छन् गम्भीर रोग आफ्नै जीवनको लागि परिचित फर्कन सक्नुहुन्छ जसले पछि र अझै काम राख्न धेरै मान्छे हो, एउटा ठूलो परिवार मानिस र कम्पनी को प्राण हुन? यस्तो मान्छे, समाज को दुर्भाग्य सबै, छैन त धेरै, तर फ्रान्सेली खेलाडी Abidal एरिक एक ज्वलन्त उदाहरण। लाइन मा डिफेन्डर, क्याटालान "बार्सिलोना", फ्रान्सेली "मोनाको" को पूर्व खेलाडी र एक महान परिवार मानिस तीन सुन्दर छोरी छ जो। पाठकहरूका आफ्नो जीवनी प्रतिनिधित्व छन्।
एरिक Abidal। बाल्यकाल र किशोरावस्था
, लिओन मा 1979 मा - फ्रान्स को गणतन्त्र को एकदम ठूलो शहर मा एरिक Abidal Sylvaine जन्म। एक जवान फुटबल खेलाडी बन्ने आफ्नो गृहनगर मा थाले, तर दुर्भाग्य केटा गरेको प्रतिभा एरिक देख्न सक्ने लियोन को एकेडेमी, उहाँले एकेडेमी "लियोन Dyusher" प्ले थाले। अझै पनि धेरै युवा, यो पूर्ण "खाने" शत्रु आक्रमण, मजबूती दुवै सुरक्षा flank बंद कि र productively आक्रमण मा ब्रो मा जडान, तर पनि केन्द्रीय क्षेत्रमा प्ले गर्न सकिएन पर्याप्त छ।
खेल खेल क्यारियर को शुरुवात
एक पेशेवर खेलाडी रूपमा एरिक आफ्नो debut 2000 मा, मा sosotave प्रतिद्वन्द्वी को एक लियोन "मोनाको" को आफ्नो घर सहरमा एफसी गरे।2धेरै सफल छैन Abidal यो समय को लागि 22 खेल खेल्दै, फ्रान्स को दक्षिण मा एक सानो राजकूमारद्घारा शासित राज्य को टोली लागि सिजन बिताए, तर एक पटक remarked विफल। 2002 मा, एक जवान फ्रान्सीसी जो पनि2मौसम बाँया पछि टोलीमा, "लिले", सामेल, तर प्रदर्शन यस क्लब मा सफल भन्दा बढी बोलाउन सकिन्छ। "Olympique लियोन" - एक प्रमुख खेलाडी धेरै 62 को रूपमा मिलान खर्च र भएपछि, "लिले" एरिक Abidal फ्रान्स प्रभुत्व जो आफ्नो गृहनगर टीम, फर्के छ।3अभूतपूर्व सिजन उहाँले तिनीहरू किनभने क्लब को लोगो मा देखाइएको पशु को भनिन्छ थिए, "फ्रान्सेली सिंह" को लागि आयोजित। उहाँले नीलो र सेतो मा एक प्रमुख खेलाडी बन्न व्यवस्थित र त्यो क्षण देखि चढाई तारा Erika Abidalya को युग सुरु भयो।
फ्रान्स एरिक उहाँले बस आफ्नो दाहिने मनमा इन्कार गर्न सकेन भनेर त्यस्तो प्रस्ताव प्राप्त गरेपछि। धेरै कातालान "बार्सिलोना" तिनीहरूलाई एउटा सम्झौता Abidal आनाकानी गरेनन् भनेर साइन इन गर्न होनहार फ्रान्सीसी प्रस्ताव गरेको छ। 15 लाख यूरो स्थानान्तरण लागि "Olympique लियोन" भुक्तान थिए, तर त्यतिबेला यो मुद्रा को ठूलो रकम थियो, र हरेक क्लब खेलाडी खरिद, को रक्षात्मक लाइन को थप प्रतिनिधि मा यस्तो योगफल फेंक टाढा (नियम, तिनीहरूले भन्दा धेरै सस्ता छन् किन्न सक्छन् midfielders र फर्वाडहरु)। को "बार्सिलोना" समय जो प्रत्येक खेलाडी को क्यारियर मा हुन्छ चरमोत्कर्षलाई, त्यसैले भनिन्छ गर्न सकिन्छ। एरिक Abidal सकेन कल्पना 7-8 वर्ष पहिले उहाँले नियमित युरोपेली कैलिबर को दिग्गज प्ले र "शिविर खेल्नुहोस" मा 90,000 प्रशंसक को ताली जाने भनेर? जवाफ स्पष्ट छ। 2007 देखि 2013 को लागि, सम्पूर्ण6वर्ष समयमा, फ्रांसीसी शरीर र प्राण क्याटालान ग्रैंड लागि दिइएको थियो र barca मा 125 खेल खर्च, तर आफ्नो रोग गम्भीर लङ्गडो ...
एरिक Abidal: रोग
- 2011 मा, सबै खेलाडी जस्तो देखिने एक मात्र औपचारिकता थिए एक चिकित्सा परीक्षा। दिन को लागि Abidal घातक कुरा, समयमा थियो एक पेट अल्ट्रासाउंड यो inoperable फेला परेन कलेजो क्यान्सर क्यान्सर -। यस मामला मात्र प्रत्यारोपण सक्छ मदत गर्न। सबैभन्दा Abidal र आफ्नो परिवारको लागि खुसीको कुरा, यो दाता उहाँले एरिक एक भान्जा हुन स्वयम्सेवकको, छैन पनि लामो हेर्न थियो। पूर्ण उपचार Abidal प्रत्यारोपण को कोष लियो गर्ने परिवारको समर्थन र क्याटालान क्लब, संग सफल र कलेजो थियो "समातिए।" केवल वाक्यांश संग टी-शर्ट मा फ्रान्सेली रक्षक समर्थन: "- मैड्रिड" रियल "-" सबै कुरा फरक टोली क्षेत्रमा खेलाडीहरू मा राम्रो हुनेछ, Abidal ', र पनि एक sworn शत्रु "बार्सिलोना एरिक समर्थित, यो एउटै परिवारका पहाड छ, र लाखौं प्रशंसक आफ्नो पाल्तु जनावर को खेल हेर्न मौका थियो जो। को बाधा पारित गरिएको छ एक क्यान्सर रोग को रूप मा भएपछि, Abidal धेरै लाजमर्दो पुनर्वास तथापि, कारण यसको असामान्य अनुरोध गर्न, उहाँले अझै पनि क्षेत्र फर्कन व्यवस्थित थियो, तर पहिले नै उहाँले धेरै वर्ष पहिले प्ले जहाँ क्लब, मा - "मोनाको"। उहाँले त्यहाँ एक foothold पाउन असफल भयो, र यति Piraeus "Olympiakos" को विकल्प खोज्नु भएन त खराब, पछि सबै, टोलीमा पनि "च्याम्पियन्स लिग" मा कार्य गर्दछ। एरिक Abidal - ठीक छ, हामी, बलियो-इरादों फुटबल एक उच्च स्तर मा प्रदर्शन गर्न सक्षम हुनेछ कसरी धेरै अनुमान मात्र गर्न सकिन्छ।
मृत्यु क्षति हटाउन के हुनेछ?
आफ्नै हातले एक पुतली कसरी बनाउने
सेन्ट पीटर्सबर्ग क्षेत्रमा: पूर्ण सूची
बच्चाहरु को लागि चुचुराहरूको - प्रयोग को लागि निर्देश।
के प्रकृति र मानव जीवनमा चरा महत्त्व छ? लोपुन्मुख जाती